GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ọ bụrụ na mmadụ na-ele mma elu ahụ́ anya otú dị mma, obi ga na-adị ya ụtọ. Ma, obi ga na-ajọ ya njọ ma ọ bụrụ na ọ na-ele ya anya otú na-ekwesịghị ekwesị.
Gịnị mere ihe mara mma ji amasị anyị?
Ndị mmadụ amatabeghị kpọmkpem otú ụbụrụ anyị na-esi achọpụta na ihe mara mma. Baịbụl ekwughị otú ụbụrụ anyị na-esi eme ya, kama, ọ gwara anyị ihe mere ihe mara mma na-eji amasị anyị. O kwuru na Chineke kere anyị n’oyiyi ya. (Jenesis 1:27; Ekliziastis 3:11) O kekwara ụmụ mmadụ ka ha pụọ iche, ahụ́ ha ana-arụkwa ọrụ otú pụrụ iche. Ọ bụ ya mere otu onye dere abụ n’oge ochie ji kwuo, sị: “M ga-eto gị [Chineke] n’ihi na i kere m n’ụzọ dị egwu, dịkwa ebube.”—Abụ Ọma 139:14.
Taa, ọtụtụ ndị na-ewere ya na ọ bụ mma ka e ji ele. Ihe mere ha ji eche otú ahụ bụ n’ihi ụdị ejiji na ihe ndị e ji achọ mma ha na-ahụ n’ebe e si akpọsa ngwá ahịa. O nwere ihe otu akwụkwọ kwuru gbasara ndị ọcha. Ọ sịrị na ọ bụrụgodị na mmadụ na-akpa ezigbo àgwà, na obi anaghị adị ya mma ma ọ bụrụ na o chere na ya amaghị mma. Ihe ọ pụtara bụ na onye si otú a ele mma elu ahụ́ anya ga-eleghara àgwà ya anya, nke bụ́kwanụ ihe ka mkpa.—1 Samuel 16:7.
N’ọtụtụ obodo, ndị mmadụ na-achọ ịdị otú ọ ga-abụ onye ọzọ hụ ha agụụ mmekọahụ agụwa onye ahụ
Ọtụtụ ndị na-achọkwa ịdị otú ọ ga-abụ mmadụ hụ ha agụụ mmekọahụ́ agụwa onye ahụ. Ndị kacha eme ihe a bụ ụmụ nwaanyị. N’afọ 2007, òtù na-amụ gbasara àgwà ndị mmadụ n’Amerịka kwuru na n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ n’ebe niile e si agbasa ozi ma ọ bụ na-atụrụ ndụ, a na-egosikarị ụmụ nwaanyị otú ga-eme ka mmekọahụ gụwa onye ọ bụla hụrụ ha. Baịbụl kwuru na anyị kwesịrị izere ụdị àgwà a, kwuokwa ihe mere anyị ji kwesị izere ya.—Ndị Kọlọsi 3:5, 6.
“Unu ekwekwala ka mma unu na-achọ bụrụ ịkpa isi efu . . . , kama ka ọ bụrụ mmadụ zoro ezo nke dị n’ime obi, nke yi uwe na-apụghị imebi emebi, bụ́ mmụọ dị jụụ, nke dịkwa nwayọọ, nke bara uru nke ukwuu n’anya Chineke.”—1 Pita 3:3, 4.
Gịnị mere na anyị ekwesịghị ilekwasị anya naanị ná mma elu ahụ́?
Ụfọdụ ndị na-ekwu na onye mara mma kwesịrị ịna-egosi ụwa niile na ya mara mma. Òtù ahụ na-amụ gbasara àgwà ndị mmadụ kwukwara na a bịa n’obodo a na-ewere na ọ bụ onye mara mma bụ mmadụ, ihe ụmụ nwaanyị ka na-etopụta etopụta na-amụtakarị bụ na ahụ́ ha kwesịrị ịna-agụ ndị ọzọ agụụ, nakwa na ọ bụ otú ahụ́ ha dị kacha mkpa. Ụdị ihe a na-emebi ihe. Ọ na-akpa ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ahụ́ ike mmadụ aka ọjọọ. Nchọpụta e mere egosikwala na mmadụ ilekwasị anya ná mma elu ahụ́ ya nwere ike ime ka onye ahụ na-echegbu onwe ya, kpọọ onwe ya asị, na-eleda onwe ya anya, gharakwa ịna-eri nri nke ọma. O nwekwara ike ime ka onye ahụ daa mbà.
“Wepụ ihe na-enye nsogbu n’obi gị, ekwekwala ka ọdachi dakwasị anụ ahụ́ gị; n’ihi na oge okorobịa na uju ndụ bụ ihe efu.”—Ekliziastis 11:10.
Olee otú onye uche ya zuru okè si ele mma elu ahụ́ anya?
Baịbụl kwuru na onye ma ihe, ma ọ bụ onye nwere “uche zuru okè” na-emeru ihe n’ókè. (1 Timoti 2:9) Ihe ọ pụtara bụ na onye na-emeru ihe n’ókè anaghị echegbu onwe ya maka otú ahụ́ ya dị, kama, ọ na-elekọta onwe ya, ọ naghịkwa achọ ka ọ makarịa ndị ọzọ. Ọ na-echebakwara otú ndị ọzọ nwere ike isi na-ele ya anya echiche. Ndị mmadụ ga na-akwanyere ụdị onye a ùgwù, ihe ya ga na-amasị ha, nke ka nke bụ na ya na Chineke ga-adị ná mma. (Maịka 6:8) Ndị na-emeru ihe n’ókè na-akakwa enweta ezigbo ndị enyi. Àgwà ha na-adọtakarị onye ọ bụla chọrọ ịlụta onye ya na ya ga na-ebi n’udo, ọ bụghị onye nwere mmasị naanị n’otú ahụ́ ha dị.
E nwere ọtụtụ ihe mere Baịbụl ji gwa anyị ka anyị lekwasị anya karịa n’ụdị mmadụ anyị bụ, ya bụ, “mmadụ zoro ezo nke dị n’ime obi.” (1 Pita 3:3, 4) Nká anaghị agbanwe àgwà ọma mmadụ otú ọ na-agbanwe mma elu ahụ́. Mmadụ nwedịrị ike ịna-akpakwu àgwà ọma ka afọ ndụ ya na-agbago. Ilu 16:31 kwuru, sị: “Isi awọ́ bụ okpueze mara mma mgbe e nwere ya n’ụzọ ezi omume.” N’ihi ya, ọ bụrụ na anyị agbalịa na-eme ihe Baịbụl kwuru, ma ànyị ka na-eto eto ma ànyị emeela agadi, anyị ga-ama ụdị mma na-adịgide adịgide, ndị ọzọ ga na-akwanyere anyị ùgwù, onwe anyị ejukwa anyị afọ.
“Ịma mma pụrụ ịbụ ụgha, mma elu ahụ́ pụkwara ịbụ ihe efu; ma nwaanyị nke na-atụ egwu Jehova na-enwetara onwe ya otuto.”—Ilu 31:30.